EPI: YeEuropean microprocessor chirongwa | Linux Vakapindwa muropa
EPI: yeEuropean microprocessor chirongwa
Isaac | | Noticias, Resources
Europe iri kugadzirira chirongwa chikuru, chinonzi EPI (European processor Initiative), kugadzira microprocessor yepamusoro-soro kudzivirira kutsamira kwetekinoroji kuUnited States. Pfungwa yakanyanya kudikanwa uchifunga mamiriro azvino uye mablockades akaiswa neUnited States kuChina. Europe inoda mapurojekiti makuru ekubatana pakati penhengo dzayo senge iyi.
Tine yakanyanya kuvimba netekinoroji vekunze uye vakatarisana nehumwe hunyengeri hwevematongerwo enyika kana geopolitics, hatigone kumira tisina kumira kana kupfugama pamberi pemasimba. Tine EPI tichava neyemangwana microprocessor ine huwandu hwakawanda hwekudyara mukusimudzira kwayo nekutora nyika gumi dzeEurope, kusanganisira Spain, Sweden, Germany, France, Switzerland, Italy, nezvimwe.
Kunyanya, ye Spain nhengo mbiri dzakakosha dzinotora chikamu, kambani inozivikanwa mune semiconductor chishandiso dhizaini uye iyo supercomputing nzvimbo iri muBarcelona. Ndokunge, imba yekomputa yeMarenostrum yatakambotaura nezvayo kakawanda. Vese pamwe chete ivo vachashanda kugadzira yakakwira kuita uye magetsi anoshanda chip.
Nayo ivo vanozokwanisa kugadzira ramangwana exa-sikuru supercomputer (EFLOPS), uye voitambanudzira kune zvimwe zvinoshandiswa. Uye izvi, uye izvi ndizvo zvinofanirwa kuitwa neblog iri, ivo vanozovakirwa pairi yakavhurika ISA, iyo RISC-V yatakataurawo pane dzimwe nguva muLxA. Nenzira iyi, isu hatizovimbe nemachipisi kubva kuIntel (Xeon), AMD (EPYC), Oracle (SPARC), IBM (SIMBA), nezvimwe, uye ndiani anoziva kana mune ramangwana zvakare revatengi komputa. Unogona here kufungidzira 100% European PC? Ndinovimba rimwe zuva.
Resumiendo chirongwa che EPI, yaizove neanotevera akakosha mapoinzi:
Gadzira a yakakwira-kuita, yakajairwa-chinangwa processor.
Inogona kushandiswa mu supercomputing muna 2023, asi iri kushandawo kuwana ma processor ezvevatengi masystem, mashoma ekushandisa zvishandiso, mota, nezvimwe.
Kubva pane solid solid system uye yakawedzerwa nenguva.
Pasina mubvunzo imwe nhau huru yakatibata isu nekushamisika mushure huawei matambudziko uye kuvharirwa kwetekinoroji nekuda kwehondo pakati peUnited States neChina. Kana ikatanga kubereka michero yakawanda uye isu tichiziva dzimwe nhau, tichazvitaura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » EPI: yeEuropean microprocessor chirongwa
Pakati pehondo yedhijitari, hunyanzvi hwetekinoroji inova nyaya yekurarama.
Kunetsekana muVim kwakatendera kodhi kuitisa kana uchivhura TXT
Google yakabuda kuzoruramisa zvirambidzo zveManifest V3 uye kuti hazvizokanganisa vanopokana nevashambadzi